अमेरिका मा, bridesmaids लागि कपडे को विकल्प को प्रश्न सामान्यतया धेरै बस हल: तिनीहरूले सबै एउटै छन्, र सामान्यतया दुलही आफु रोजेका हुन्छन्। विवाह को लागि पोशाक आफैलाई एक प्रेमिका फेला पार्न हुनेछ त्यसैले रूस मा त्यहाँ यस्तो कुनै अनुकूलन छ।
वर, को पाठ्यक्रम, यो सजिलो कान्छो भन्दा पोशाक चयन गर्न छ। तर विवाह मा मेहमान पोशाक खरीद पहिले केही महत्त्वपूर्ण विवरणहरू विचार गर्न हुनेछ।
विवाह को रानी दुलही छ
विवाह - छैन जहाँ हरेक केटी आफ्नो प्रेमिकाहरुलाई सौन्दर्य overshadow चाहन्छ पार्टी छ। कुनै पनि मामला मा सबै भन्दा सुन्दर र रमणीय, यो छुट्टी मा अवसर को धेरै नायक हुनुपर्छ। तसर्थ, उनको मित्र आफ्नै व्यर्थ को घाँटी आउन र अनावश्यक ध्यान आकर्षित बिना पोशाक लगाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, पनि नीरस र गैर-उत्सव outfit जवान आदर छैन रूपमा मानिन्छ हुन सक्छ। मित्र एक विवाह पोशाक छनौट, आफ्नो solemnity र नम्रता बीच एक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
संग छैन स्वागत मोडेल फ्लफी स्कर्ट, किनभने प्रायजसो यो विशेषता दुलही गरेको विवाह पोशाक। पनि प्रशस्त मात्रामा उपस्थित क्रिस्टल, मोती, सेक्विन र अन्य चम्कने छन् जो आदेश, छुट्टयाउँछन्।
दुलही साथ सँगै चयन
के तपाईं साक्षी रूपमा विवाह गर्न आमन्त्रित गरिन्छ भने कुनै हानि विवाह हुँदैछ जो मित्र, उनले आफ्नो outfit कसरी देख्नुहुन्छ माग्छ। सायद तपाईं र किनमेल जाने र प्रस्तावित दायरा मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु।
आज एक निश्चित शैली मा एक विवाह व्यवस्थित गर्न अविश्वसनीय लोकप्रिय छ कि पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईं एक विषयगत उत्सव लागि आमन्त्रित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो पोशाक शैली मा फिट हुनुपर्छ।
अक्सर, युवा अतिथि एक निश्चित लीन गर्न आग्रह गर्दै वस्त्र को, रंग विवाह मा निर्धारित गरिने। यसको उत्सव को पक्षमा सन्दर्भमा आफ्नो मित्र सोध्न निश्चित हुनुहोस्।
लम्बाइ मान छ
एक विवाह पोशाक प्रेमिका औसत लम्बाइ चयन गर्न मनमोहक छ। तल्ला मा स्कर्ट अनावश्यक ध्यान आकर्षित र आन्दोलन को लागि धेरै असुविधाजनक छ। र जोडी अतिथि छिटो नृत्य र प्रतियोगिताहरु रम्न जम्मा यदि, तपाईं जोखिम लामो पोशाक तालिका मा सम्पूर्ण साँझ बिताउँछन्।
यो आवश्यक छैन अचाक्ली जाने र विवाह को लागि साह्रै छोटो पहिरन छनौट गर्न छ। आफ्नो जीवन एक सुन्दर राजकुमार देखा गरेको छैन, यदि र तपाईं अरू कसैको विवाह मा फेला पार्न आशा गुमाउनु छैन, यो शरीर को भागहरु नंगे एउटा कारण अझै पनि छैन। यो पनि गहिरो neckline गरेर छाती पर्दाफास गर्न अनुज्ञेय छैन।
तपाईंको पोशाक जो एक निश्चित बन्द implies, सुरुचिपूर्ण र स्टाइलिश हुनुपर्छ। पारदर्शी आवेषण संग कपडे - तथापि, तपाईं ध्यान अन्तिम सिजन को प्रवृत्ति भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यी मोडेल एकै समयमा सेक्सी र रोकी हेर्न मदत।
मुख्य Taboo सेतो छ। निस्सन्देह, दुलही एक मूल पोशाक लगाउने निर्णय भने, उदाहरण, रातो रंग को लागि, सेतो पोशाक अनुज्ञेय प्रेमिका छ। अन्यथा, यो यस्तो पहिरन धारण गर्न राम्रो छ।
खराब रंग "हाथीदांत" र "शैम्पेन", पनि परम्परागत विवाह मानिन्छ जो। पनि अर्को बरफ-सेतो साटन विवाह गर्न रंग को पोशाक पोशाक कि दुलही पुरानो र पहेंलो हेर्नेछौं याद गर्नुहोस्।
विवाह मा विवाह अतिथि लागि सबैभन्दा लोकप्रिय रंग सुन, चाँदी, फिरोजा, गुलाबी, बैजनी, पहेँलो, हरियो, आरु छन्। सामान्यतया, चयन वा नीरस प्यास्टेल रंग र कोमल।
विवाह लागि कालो पोशाक बारेमा कुरा गर्न छुट्टै चाहन्छु। कालो साँझ पोशाक लागि क्लासिक रंग हो, तर विवाह उत्सव को मामला मा। पाहुनाहरूको बाँकी, र जोडी तपाईं शोक रंग मा तैयार देखि कि विवाह, आफ्नो नकारात्मक भावना पैदा भएको छ मान गर्न सक्छन् गर्छन। तपाईं बिल्कुल विवाह मित्र को लागि सिर्फ एक कालो पोशाक लगाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि माथि उज्ज्वल सामान र फरक रंग को एक केप रोज्नुहोस्।
ऊनी पोशाक: सुशील र सुरुचिपूर्ण!
कसरी माप सही लिने?
कसरी मूल देखि एक नक्कली "Montal" भेद गर्न: विश्लेषण
फेरो को अद्भुत शहर। पोर्चुगल तपाईं पर्खिरहेको!
धेरै कठिन मासु - छैन यो नत्याग्ने एउटा कारण
बेलारुसी खेलाडी Vadim Devyatovskiy: जीवनी, खेल र राजनीतिक क्यारियर, व्यक्तिगत जीवन
जो बार्सिलोना होटल राउन्ड प्राप्त गर्नुपर्छ
Cashless पैसा - यो के हो, र तिनीहरूले कसरी काम गर्छ?
एक हुक Pico कसरी बाँध गर्न। विकल्पहरू
ख्रीष्टियन: रूस मा वितरण को इलाका। संसारमा ख्रीष्टियन को उद्भव र प्रसार
ड्राइभिङ बोलेरो crochet: काँटाले बुन्नु सिद्धान्तहरू र सिफारिसहरू